လှပသောတိရစ္ဆာန်များ- လူသိအများဆုံးနှင့် ၎င်းတို့၏ဝိသေသလက္ခဏာများစာရင်း | Green Renewables များ
လူအများစုသည် တိရိစ္ဆာန်များကို နှစ်သက်ကြပြီး ကျွန်ုပ်တို့ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ တိရစ္ဆာန်တိုင်းတွင် ၎င်းတို့၏ အလှတရားများ ရှိကြသော်လည်း ၎င်းတို့သည် တည်ရှိနေပါသည်။ ချစ်စရာတိရစ္ဆာန်များ ဒါဟာ သာမန်ပြည်သူတွေ အတွက် အသိသာဆုံးပါ။ ၎င်းတို့သည် ထူးခြားဆန်းပြားသော တိရိစ္ဆာန်များဖြစ်ပြီး မတူညီသောလက္ခဏာများနှင့် အရောင်များ ရှိသောကြောင့် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့မှာ ရှားပါးသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။
ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ထင်ရှားကျော်ကြားလှတဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေ နဲ့ သူတို့ရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ ဆိုတာကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
1.4 Albino ဒေါင်း
2 ချစ်စရာ မြေတိရစ္ဆာန်များ
2.2 Friesian မြင်း
2.3 ဆိုက်ဘေးရီးယား Husky
လူအများစုသိကြတဲ့ လှပတဲ့တိရိစ္ဆာန်များစာရင်းကို ပြုစုကြမယ်နော်။
Macaws သည် တောင်အမေရိက၏ မိုးသစ်တောများတွင် နေထိုင်ပြီး ကြက်တူရွေးများပိုင်သည့် ထူးခြားဆန်းပြားသောငှက်များဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ အလှသည် ၎င်း၏ တောက်ပသော အရောင်များ ပေါင်းစပ်မှုကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤလေယာဉ်အတွက် အဓိကအရောင်များဖြစ်သည့် တောက်ပသောအဝါရောင်၊ ကြက်သွေးရောင်၊ မြက်စိမ်းရောင်၊ တော်ဝင်အပြာနှင့် နေရောင်ခြည် လိမ္မော်ရောင်များ။ လူများစွာသည် macaw ကို အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအဖြစ် အသုံးပြုကြသည်၊ ထို့ကြောင့် Ara ararauna သည် ၎င်း၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဂရုစိုက်ရမည့်မျိုးစိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Macaws သည် အလတ်စားငှက်များဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့၏ အတောင်များသည် အလွန်ကျယ်ဝန်းပြီး ဆန့်လိုက်သောအခါ လူအများ၏ အာရုံစိုက်မှုကို ဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ ဤငှက်များသည် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး အလွန်ကောင်းကြပြီး အုပ်စုလိုက် လမ်းလျှောက်ခြင်းကို နှစ်သက်ကြပြီး ကောင်းကင်တွင် အလှဆုံးဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်မှာ သက်တံဆွဲထားပုံရတဲ့ မကော်အုပ်စုတစ်စုရဲ့ ပျံသန်းမှုကို စောင့်ကြည့်ရတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။
စာပေတွင် ငန်းကို အဖိုးတန်တိရစ္ဆာန်အဖြစ် ဖော်ပြသည်။ အရုပ်ဆိုးသော ဘဲကလေးတစ်ကောင်၏ ဇာတ်လမ်းသည် လုံးဝမှန်သည် သို့မဟုတ် လုံးဝမမှားပါ။ တကယ်တော့, ငန်းများသည် လှပသော အဖြူရောင် သတ္တဝါများ ဖြစ်လာရန် မွေးဖွားလာသည် မဟုတ်ပေ။ဒါပေမယ့် သူတို့လေးတွေ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ချစ်စရာကောင်းပြီး နူးညံ့ပါတယ်။
ငန်းသည် ကြီးထွားဖွံဖြိုးလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းသည် လှပတင့်တယ်မှုနှင့် ကျက်သရေရှိသော သင်္ကေတတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ ငန်း၏အလှသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို အထင်ကြီးစေခဲ့ပြီး၊ ၎င်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အလှပဆုံးတိရစ္ဆာန်များထဲမှ တစ်ကောင်ဖြစ်လာသင့်သည်မှာ ထင်ရှားပါသည်။
ဘင်္ဂလားကျားသည် ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ခွန်အား၏သင်္ကေတဖြစ်သည်။ ဤသတ္တဝါသည် မည်သူမဆို အံ့အားသင့်စေမည့် ခမ်းနားသောအသွင်အပြင်ရှိသည်။ ဂရိ၊ ပါရှားနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့ကဲ့သို့ ဒဏ္ဍာရီများစွာတွင် ကျားကို ဇာတ်ကောင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းမှာ အံ့သြစရာမဟုတ်ပေ။
သူ့မျက်လုံးတွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုက ဘယ်သူ့ကိုမဆို စွဲဆောင်နေတယ်။ မျိုးရိုးဗီဇ ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်၊ အချို့သော ဘင်္ဂလားကျားများသည် အဖြူရောင်မွေးကြသည်။ ကျားတွေက အရမ်းလှပြီး အဖြူဆိုရင် ပိုလှတယ်။ ၎င်းသည် ထူးခြားဆန်းပြားပြီး အခြားအရာများနှင့် ကွဲပြားသည့်အတွက် ပို၍ထူးခြားသောအရောင်ဖြစ်သည်။
ပန်ကာပုံသဏ္ဍာန် အမွေးအတောင်များသည် နှင်းဖြူဖွေးဖွေးနှင့် လှပပြီး အလွန်ထူးခြားသည်။ ဒီငှက်က တကယ့် စူပါမော်ဒယ်၊ သူမဟာ သူ့ရှေ့က ဖြတ်သွားသူတိုင်းကို အမြဲတမ်း အလှကို ပြသဖို့ အမြဲလိုလို ဟန်ဆောင်နေပါတယ်။ ဘင်္ဂလားကျားကဲ့သို့ပင် albino ဒေါင်းသည် သမားရိုးကျထက် များစွာထူးခြားသည်။ ဒေါင်းကိုယ်တိုင်က လှပပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်လာမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ မြို့ပြပန်းခြံတွေမှာ ခရီးသွားတွေကို ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ သို့ရာတွင်၊ ၎င်းသည် အခြားအရောင်များနှင့် ကွဲပြားသောကြောင့် ၎င်းကို ပိုမိုထူးခြားထူးခြားစေသည်။ ထို့ကြောင့်၊ albino ဒေါင်းကို ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကျော်ကြားဆုံးတိရစ္ဆာန်များထဲမှ တစ်မျိုးဟု ယူဆကြသည်။
၎င်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အသိဉာဏ်အရှိဆုံး တိရစ္ဆာန်များထဲမှ တစ်ကောင်ဖြစ်ရုံသာမက ၎င်း၏ အလှကြောင့်လည်း လူသိများသည်။ လင်းပိုင်တွေရဲ့ အလှတရားဟာ သူတို့ရဲ့ လှပတဲ့အသွင်အပြင်ကို ကျော်လွန်ပြီး လူတွေဟာ လင်းပိုင်တွေနဲ့ အမြဲပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြတယ်၊ သူတို့ရဲ့ တည်ရှိမှုကို တကယ်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ကမ္ဘာမှာ လင်းပိုင်သည် ပျော်ရွှင်မှု၊ လွတ်လပ်မှုနှင့် အလိုလိုနေရင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။ လင်းပိုင်တစ်ကောင် ဒါမှမဟုတ် လင်းပိုင်အုပ်စုတစ်ဖွဲ့က လှိုင်းလုံးတွေကြားမှာ ရေကူးပြီး လှိုင်းစီးနေတာကို တွေ့တဲ့အခါ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်က တိုးတက်လာမှာဖြစ်ပြီး အရာအားလုံးကို အထူးစိတ်ခံစားမှုတွေနဲ့ ကြည့်သွားမှာပါ။ လင်းပိုင်သည် အမြဲပြုံးနေပုံရသည်။
ဤငါးသည် အမြဲတမ်းတောက်ပနေစေသည့် အတွင်းပိုင်းအလင်းရောင်တစ်ခုရှိပုံရသည်။ ဤငါးသည် ရေအောက်ဓာတ်ပုံဆရာများ၏ မှန်ဘီလူးဖြင့် ရိုက်ကူးလိုသော သတ္တဝါများထဲမှ တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ကိုယ်ပိုင်အလင်းရောင်ရှိသော်လည်း မန်ဒရင်းငါးသည် အလွန်ရှက်တတ်ပြီး ညဘက်မိတ်လိုက်သည့်အခါတွင် ပေါ်လာတတ်ပါသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်၊ ဒဏ္ဍာရီလာ တရုတ်နဂါးနှင့် ဆင်တူသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို Mandarin ဟုခေါ်သည်။
ပုတ်သင်ညိုကိစ္စတွင်၊ ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအရာမှာ အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ အရောင်ပြောင်းနိုင်မှုဖြစ်သည်။ ပုတ်သင်ညိုသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အလှဆုံးတွားသွားသတ္တဝါဖြစ်သည်။ အခြေအနေကိုလိုက်၍ အရောင်ပြောင်းနိုင်သည်ကို စိတ်ကူးကြည့်ပါက သင့်ကိုထူးခြားစေမည်ဖြစ်သည်။ Chameleon များသည် ၎င်းတို့၏အရေပြားတွင် 'chromatophores' ဟုခေါ်သော ရောင်ခြယ်ဆဲလ်များ ပါရှိသောကြောင့် အရောင်ပြောင်းနိုင်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရောနှောနိုင်စေခြင်း။ သူတို့သည် သားရဲကောင်များကို ရှောင်ရန် သို့မဟုတ် ရည်းစားထားရန် ၀တ်စားဆင်ယင်လိုသည့်အခါတိုင်း အရောင်ပြောင်းသည်။
မြင်းများကို လူ့အဖွဲ့အစည်းက အလွန်ချစ်မြတ်နိုးကြပြီး ကျက်သရေရှိပြီး ဝယ်ယူနိုင်စွမ်းအား၏ လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မြင်းများသည် ထိန်းသိမ်းရန် အလွန်စျေးကြီးပြီး အရင်းအနှီးကောင်းသူများသာ တတ်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ Friesian မြင်းမျိုးစိတ်များသည် သာမန်မြင်းများထက် ပို၍ ကျက်သရေရှိသောကြောင့် လူသိများသည်။
Friesian မြင်းသည် ကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီး ကျက်သရေရှိသော တိရစ္ဆာန်မျိုးဖြစ်သည်။ လုံးဝ monochrome နှင့် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် သင့်အား တောရိုင်းနှင့် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော နယ်မြေတစ်လျှောက် ခရီးတစ်ခုဆီသို့ ခေါ်ဆောင်သွားပါသည်။ Friesian မြင်းသည် မူလက နယ်သာလန်မှ ဆင်းသက်လာသည်။ ၎င်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှေးအကျဆုံး ပြည်တွင်းမြင်းမျိုးစိတ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။. ၎င်း၏ဘိုးဘေးဖြစ်သော "တာပိန်" မြင်းသည် XNUMX ရာစုတွင် လူသားများအမဲလိုက်မှုကြောင့် မျိုးသုဉ်းသွားခဲ့ပြီး သမိုင်းတစ်လျှောက် အရိုင်းဆုံးမြင်းအဖြစ် လူသိများသည်။
ခွေးကမ္ဘာကို ရည်ညွှန်းပါက၊ Siberian husky သည် အလှဆုံးဖြစ်သည်။ အလှမယ်ဆုယူတဲ့သူက ပြီးသွားပြီ။ ၎င်းတို့သည် အနက်ရောင်နှင့် အပြာရောင်မျက်လုံးများဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော အဖြူရောင်အရောင်ရှိသော ကျက်သရေရှိသော တိရစ္ဆာန်များဖြစ်သည်။ သူတို့က ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံကို ဖမ်းစားလေ့ရှိပြီး ၎င်းတို့၏ပုံရိပ်သည် အကာအကွယ်၊ ခွန်အားနှင့် သံလိုက်ဓာတ်ကို လှုံ့ဆော်ပေးသည်။. အကျင့်စာရိတ္တအဆင့်တွင် ၎င်းတို့သည် အလွန်ချစ်ခင်ကြပြီး ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်ကြသည်။
ပုံဆောင်ခဲလိပ်ပြာ သို့မဟုတ် "Greta Oto" ဟု သိပ္ပံနည်းကျ လူသိများသော လိပ်ပြာသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အထူးဆန်းဆုံးနှင့် အထူးခြားဆုံး လိပ်ပြာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အတောင်ပံများ၏ အထည်သည် ဖောက်ထွင်းမြင်ရပြီး အစွန်းများသည် အညိုရောင်မှလွဲ၍ ဤလိပ်ပြာသည် နောက်ဆုံးတွင် ၎င်းတည်ရှိရာ နောက်ခံအရောင်သို့ ပြောင်းသွားသည်၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရောထွေးလုနီးပါး။ ၎င်းသည် ၎င်းတို့အား အသီးအရွက်များနှင့် နှောင့်ယှက်တတ်သော သားရဲများနှင့် ရောနှောခြင်းအတွက် အရည်အချင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤအချက်အလက်ဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ အကျော်ကြားဆုံး လှပသောတိရစ္ဆာန်များအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ပတ်ဝန်းကျင် » ချစ်စရာတိရစ္ဆာန်များ